Waaheen Media Group » Qaar ka mid ah Dhawacyadii Ciidamada Puntland ee Galgala oo Hargeysa lagu Daaweyey
Browse:Home Videos Qaar ka mid ah Dhawacyadii Ciidamada Puntland ee Galgala oo Hargeysa lagu Daaweyey
Published by Waaheen Media on May 9, 2017 | Comments Off on Qaar ka mid ah Dhawacyadii Ciidamada Puntland ee Galgala oo Hargeysa lagu Daaweyey
Puntland ayaa dhaqaale la’aani la soo daristay taasi oo keentay in ciidamadeeda iyo shaqaalaheedii ay siin kariwaydo mushaharaadkii.
Hargeysa (Waaheen) Warar xogogaal ah Wargeyska Waaheen helay ayaa sheegaya in dhawaan Magaalada Hargeysa la keenay qaar ka mid ah dhaawacyadii ciidamada Puntland ay ka dhaacaween maleeshiyada Daacish ee ka dagaalanta Buuraha Galgala.
Ragan dhawaca oo lagu daaweyey qaar ka mid ah Cisbitaalada Magaalada Hargeysa ku yaala ayaa la sheegay in ragaasi ay Hargeysa keenen eheladii dadkaasi kuwaasi oo sheegay in Maamulkii Puntland ee ay u dagalamayeen ay daweynwaayeen taasina ay ku kaliftay iyaga oo dad shacib ah in Hargeysa ku daweystaan.
Ragan la sheegay in ay ka tirsanayeen ciidamada Puntland ayaa asal ahaan ka soo jeedda Sanaag Barri ee Somaliland, balse waxay ka tirsanaan jireen Ciidamada Puntland.
Puntland ayaa dhaqaale la’aan la soo daristay taasi oo keentay in ciidamadeeda iyo shaqaalaheedu ay siin kariwaydo mushaharaadkii.